Tani waxay noqon doontaa 9 Febraayo 2020 - TELES RELAY
ACCUEIL » kale Tani waxay noqon doontaa 9 Febraayo 2020
Tani waxay noqon doontaa 9 Febraayo 2020
Kamrooniyiinta waxay aadi doonaan goobaha codbixinta Febraayo 9 2020 si loogu doorto ku xigeenada Golaha Qaranka iyo golayaasha degmooyinka. Hay'adii doorashada ayaa isugu yeedhay Axadda 10 November 2019 Madaxweynaha Jamhuuriyadda.
Axadda 9 Axadda Feebarwari 2020, cod-bixiyeyaasha reer Cameroon waxay booqan doonaan xarumaha codbixinta. Iyaga ayaa dooran doona Kuxigeenada 180 ee aqalka hoose ee baarlamaanka iyo Xildhibaannada 10626 ee wada jirka ah ee loo yaqaan '360'. Madaxweynaha Jamhuuriyaddu wuxuu cusbooneysiinayaa khibraddii codbixinta ee laba jeer ka dib kuwii 2007 iyo 2013. 2020-da degmadu waxay daaha ka qaadi doontaa ragga iyo haweenka mustaqbalka "hagaagsan" ee baahinta xukunka. Kalfadhiga baarlamaanka ee furmaya Talaadada ayaa noqon kara kii ugu dambeeyay qaar ka mid ah wakiilo, isagoo ka warqaba xaqiiqada tartanka doorashada.
Sii socodsiin badan, codeyn
Sidaa darteed Madaxweyne Paul Biya ma uusan haynin ikhtiyaarka kordhinta xilalka. Doorashadan, si kastaba ha noqotee, waxay ku gudubtaa gobollada dhibaataysan. Dibadda, xadka bilaha 18 ee kordhinta muddada goleyaasha deegaanku kama bixin meel ku filan. Madaxa Dawladdu horeyba laba jeer ayey u kordhiyeen xil ka xayuubinta golayaasha degmooyinka. Kordhinta koowaad ee 12 bilood markaa kordhinta labaad ilaa 29 Febraayo 2020. Waajibaadka xilalka wakiiladu waxay sidoo kale raacdeen isla aayaha ku jirta gudaha wareegtada sharci dejinta. Tani waxay suurtogal ka dhigtay in laga fogaado is-dhex-galka doorashada ee 2018, ka dib si loo jaleeco jawiga siyaasadeed.
Cod-bixiyeyaashu waxay isugu yeedheen doorashada ku-xigeennada iyo golayaasha deegaanka maalinta Axadda 09 Febraayo 2020 pic.twitter.com/Hls5TJ28mu
- CRTVweb (@CRTV_web) November 10, 2019
Loolanka dhanka 9 Febraayo 2020
Isku soo wada duuboo codbixiyaashu waxay bilaabeen tartan dhab ah oo looga soo horjeedo saacadda muuqaalka siyaasadeed:
Waqtiga kama dambeysta ee gudbinta codsiyada: 25 November 2019.
Daabacaadda codsiyada mar dambe 11 december 2019.
Waqtiga kama dambeysta ee xereynta diidmada iyo cabashooyinka: laba maalmood kadib
Xallinta khilaafaadka dowladda hoose ee doorashada ka hor 17 December ee ay maamusho maxkamadaha maamulka
Xeerarka muranka badan ka taagan ee murashaxiinta doorashooyinka sharci dejinta ee golaha dastuurku horay u qabtay 23 December
Bilowga ololaha doorashada January 25 2020 labada doorashoba
Xisbiyada horay u soo nooleeyay doorashada madaxweynaha waxay ku dhawaaqayaan ka qeybqaadashada codbixinta. CPDM waxay dooneysaa inay ku xoojiso inteeda badan baarlamaanka iyo gudeheeda. Taageerayaasha Maurice Kamto iyo Cabral Libii ayaa iyaguna muujiyay xiisaha ay u qabaan kulankan siyaasadeed. Joogitaanka cadowga SDF ee “Muuqaalada Saxaafadda”, doodaha axadda ee CRTV, ayaa sidoo kale kor u qaadi doonta shaki ku haynta SDF. Doorashooyinka Cameroon, dhankeeda, waxay rabaan inay kordhaan kalsoonida lagu qabo hanaanka doorashada ee Cameroon iyada oo loo marayo codbixintan labalaab ah.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore http://www.crtv.cm/2019/11/elections-9-fevrier/
Cedric Momo Waxaa La Arkay Arday Caafimaad Sagaashan Jir ah
Melvin Akam Madaxa Guud ee MTN Cameroon?